हिरा र मोतीले बनेको यो केक ! दाम सुन्दा छक्क ! (हेर्नुस् भिडियाे) – Nepal Journal
हिरा र मोतीले बनेको यो केक ! दाम सुन्दा छक्क ! (हेर्नुस् भिडियाे)
Posted By: Nepal Journal February 14, 2018 | २ फाल्गुन २०७४, बुधबार १३:०४
फागुन १ गतेको सन्दर्भ पारेर माओवादीले पार्टी मुख्यालयमा मंगलवार २३ पाउण्डको केक काटेको छ । नेपाली सञ्चार माध्यममा शिवरात्रीका दिन सोही केकको चर्चा धेरै भयो । माअाेवादी सुप्रिमाे प्रचण्डले मन्द मुस्कानका साथ उक्त केक काटेका थिए । तर यो केकलाई ‘माथ’ गर्ने गरी हिरा र मोतीले बनेको केकको चर्चा यहाँ गर्न गईरहेका छौं ।
हेर्दा दुलही जस्ती लाग्ने यो वास्तावमा हिरा र मोतीले बनेको केक हो । यो केक बिल्कुल एक प्रतिमाकै रुपमा निर्माण गरिएको हो । यसको ड्रेसअपदेखि सबै केकमा प्रयोग हुने समाग्रीबाट बनेको छ । ६ फिट अग्लो यो केकको दाम ७ लाख युरो रहेको छ । यो केकलाई विश्वको सबैभन्दा महंगो केकका रुपमा लिइएको छ ।
यो केक दुबईमा हुन गईरहेको वेडिङ शोका लागि बनाईएको हो । यो केकलाई बेलायतका प्रसिद्ध डिजाइनर डेवी विनगमले बनाएकी हुन् । यो केक बनाउन १० दिनको समय लागेको थियो । डवीले दिनको १२ घण्टाका दरले काम गरेकी थिइन् । डेवी संसारकै सबैभन्दा महंगी डिजाइनर हुन् । उनको यो केक हेर्न अन्य देशहरुबाट मानिसहरु आउने गरेका छन् ।
केकमा के के सामाग्री प्रयोग भएका छन् ?
एक हजार अण्डा
५ हजार फूल
२० किलो चकलेट
Be the first to comment on "हिरा र मोतीले बनेको यो केक ! दाम सुन्दा छक्क ! (हेर्नुस् भिडियाे)"